कस्तो परम्परा ! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← जर्सी नं. १० केही फ्लप, केही हिट
पहिरोमा परिवारै सखाप / दुइ परिवारका ८ को मृत्यु →
वर्षको एकपटक दसौँ हजार मानिस ट्रेनको पटरीनजिक जम्मा हुन्छन् । ट्रेन आउनेबित्तिकै आफ्नो कट्टु फुकाल्छन् र टे्रनतिर देखाउँछन् । लाग्छ- ‘ट्रेनको विरोधमा उत्रिएका होलान् ।’ तर, गलत ! अमेरिकाको दक्षिणी क्यालिफोर्निया सहरको लैना निगुयलमा हरेक वर्ष दसौँ हजारको संख्यामा मानिस भेला हुन्छन्, ट्रेनलाई पुठो देखाउन । त्यो पुठो देखाउनुको कुनै उद्देश्य छैन उनीहरूसँग । उनीहरूले पछिल्लो तीस वर्ष यतादेखिको परम्परा निर्वाह गर्न त्यसो गर्ने गरेका छन् । त्यो परम्पराको नाम दिइएको छ- ‘मुनिङ एमट्रैक’ । त्यो परम्पराले केही विकृति पनि ल्याएका छन् । यो आयोजनामा सहभागी संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दो छ । अघिल्लो वर्ष अपेक्षितभन्दा धेरै मानिसको सहभागिता भयो । उनीहरूले यति धेरै रक्सी पिएर बितन्डा मच्चाए कि प्रहरी हेलिकोप्टरमै ओसार्नुपर्‍यो ।
त्यसलाई कम गर्न क्यालिफोर्निया राज्यले आफ्नो वेबसाइटमा लेख्यो- अब मुनिङ एमट्रैक आयोजना हुने छैन । तर, त्यो सूचनाले स्थानीयवासीलाई केही फरक पारेन । त्यसको टक्करमा उनीहरूले आयोजनाको आफ्ना साइट खोलेर लेखे- ‘मुनिङ एमट्रैकको ३१औ आयोजना’ । यति मात्रै होइन, स्थानीय रेडियोमा पनि यसको प्रचार गरिन्छ ।
यो परम्पराको सुरुवात १९७९ मा भएको थियो । सुरुवात कसरी भयो, त्यसको कुनै आधिकारिक दस्तावेज छैन । त्यसका ’boutमा कहानी भने यस्तो छ- ट्रेन पटरीकिनारमा रक्सी पसल थियो । त्यहाँ एक जँडयाहा आउँथ्यो । ऊ धनी थियो । त्यसले सधै अरूलाई केही न केही भनेर होच्याउँथ्यो । उसले अर्का कम धनी जँडयाहासँग सर्त राख्यो- ‘अब आउने ट्रेनलाई कट्टु फुकालेर पुठो देखा, म तँलाई एक प्याक किन्दिन्छु ।’
अकर्ले जँडयाहाले सर्त स्विकार्‍यो । उसले ट्रेन आउनेबित्तिकै कट्टु फुकालेर देखायो । एक प्याक रक्सीका लागि सुरु भएको पुठो देखाउने परम्परा त्यसका केही वर्षमा पर्वका रूपमा मनाउन थालियो ।
त्यो साइटमा आयोजनामा सहभागी हुन आउनेलाई समस्या नपरोस् भनी केही सुझाबसमेत दिइएको छ । साइटमा भनिएको छ- ‘आयोजनामा भाग लिन आउँदा पर्ने हरेक समस्याको उत्तर दिन हामी तयार छौँ ।’
यो आयोजनामा भाग लिन आउनेलाई दिइने महत्त्वपूर्ण सुझाबमध्ये एक हो- ‘सकेसम्म कार नल्याउनूस् जाँदा ट्रेनमा जानूस् ।’ राति आउने मानिसका लागि लेखिएको छ- ‘धेरै ब्याट्री र फ्ल्यास लाइट लिएर आउनूस् । राम्रो हुनेछ कि लालटिन लिएर आउनूस् । यसको वेबसाइटमा एक सहभागी हसन चाहनेले सोधेका छन्- ‘के म आफ्नो पुठोलाई रंग्याउन सक्छु ?
जवाफमा भनिएको छ ‘अवश्य’ ।